Xidiga Manchester City Raheem Sterling Oo Doonaya Inuu Dhimo Mushaarkiisa Si Uu Ugu Biiro Barcelona.
HomeWararka CiyaarahaXidiga Manchester City Raheem Sterling oo doonaya inuu dhimo mushaarkiisa si uu ugu biiro Barcelona.
Xiddiga garabka uga ciyaara Manchester City ee Raheem Sterling ayaa lagu soo waramayaa inuu damacsan yahay inuu u dhaqaaqo Barcelona , waxaana uu diyaar u yahay inuu dhimo mushaarkiisa si uu heshiiska u dhaco.
27-sano jirkaan ayaa dhaliyay sagaal gool, waxaana uu caawiyay seddex gool 25 kulan oo uu u saftay kooxda Pep Guardiola tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, laakiin waxaa la rumeysan yahay in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England uusan dooneynin inuu sii joogo Etihad.
Sterling ayaa la sheegay in uu maskaxdiisa ku wajahan yahay u dhaqaaqista Camp Nou, waxaana lala xiriirinayay Barcelona ka hor suuqii Janaayo ka hor inta aysan kooxda reer Catalan dhameystirin saxiixa Ferran Torres .
Sida laga soo xigtay The Mirror , Sterling ayaa diyaar u ah inuu si weyn u dhimo mushaarkiisa si uu ugu qasbo inuu u dhaqaaqo Barca, taasoo ku dhibtoon doonta inay hesho dhaqaale ay ku iibiso xiddiga garabka ka ciyaara.
Kooxda Xavi ayaan wali awoodin inay diwaan galiyaan Torres dhaqaale xumo darteed, warbixintu waxay soo jeedinaysaa in Man City ay ku dalban doonto 70 milyan ginni Sterling, laakiin kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa laga yaabaa inay ku qanciso heshiis ka jaban hadii Frenkie de Jong uu u dhaqaaqo dhanka kale.
Tan iyo markii uu Etihad kaga soo biiray Liverpool sanadkii 2015, Sterling ayaa dhaliyay 123 gool wuxuuna caawiyay 89 gool 317 kulan oo uu u saftay kooxda.